ITUNES: ERROR 2009 - ITUNES - 2019
Usoro njehie 2009 nwere ike ịpụta na ihuenyo nke onye ọrụ n'oge usoro mgbake ma ọ bụ melite. Dịka iwu, njehie dị otú ahụ na-egosi onye ọrụ na mgbe ị na - arụ ọrụ na iTunes, enwere nsogbu na ijikọta site na USB. Ya mere, ihe niile anyị ga-eme ga-eji dozie nsogbu a.
Ngwọta na Error 2009
Usoro 1: dochie eriri USB
N'ọtụtụ ọnọdụ, njehie 2009 bụ eriri USB ị na-eji.
Ọ bụrụ na ị na-eji eriri USB (na ọbụna Apple-certified), ị ghaghị iji dochie ya. Ọ bụrụ na eriri mbụ gị nwere ihe ọ bụla - mgbagwoju anya, kinks, oxidation - ịkwesịrị dochie eriri na nke mbụ ma hụ na ị mezue ya.
Usoro 2: Jikọọ ngwaọrụ na ọdụ ụgbọ USB ọzọ
Ugboro ugboro, esemokwu n'etiti ngwaọrụ na kọmputa nwere ike ime n'ihi ọdụ ụgbọ USB.
N'okwu a, iji dozie nsogbu ahụ, ị ​​kwesịrị ịnwale ịbanye ngwaọrụ na ọdụ ụgbọ USB ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere kọmputa desktọọpụ, ọ ka mma ịhọrọ ọdụ ụgbọ USB na azụ nke usoro usoro, ma ọ ka mma iji USB 3.0 (ọ pụta ìhè na-acha anụnụ anụnụ).
Ọ bụrụ na ị jikọọ ngwaọrụ ahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ na USB (ọpụpụ e wuru na keyboard ma ọ bụ USB), mgbe ahụ, ị ​​ga-ajụkwa iji ha, na-ahọrọ ijikọta ngwaọrụ ahụ na kọmputa.
Usoro 3: Kwupu ngwaọrụ niile ejikọrọ na USB
Ọ bụrụ na iTunes na-enye njehie 2009, ngwaọrụ ndị ọzọ jikọọ na kọmputa na ọdụ ụgbọ USB (ma e wezụga maka keyboard na òké), mgbe ahụ jide n'aka na ị ga-atụfu ha, na-ahapụ nanị ngwaọrụ Apple.
Usoro 4: mgbake ngwaọrụ site na DFU mode
Ọ bụrụ na ọ nweghị ụzọ dị n'elu nwere ike inyere aka dozie njehie 2009, ọ bara uru ịgbalị ịmeghachi ngwaọrụ site na ọnọdụ mgbake pụrụ iche (DFU).
Iji mee nke a, gbanyụọ ngwaọrụ ahụ kpam kpam, wee jikọọ ya na kọmpụta site na iji eriri USB. Mwepụta iTunes. Ebe ọ bụ na nkwarụ ahụ adịghị, iTunes agaghị achọpụta ya ruo mgbe anyị tinyere ngwaọrụ n'ime ọnọdụ DFU.
Iji tinye ngwaọrụ Apple gị n'ime ọnọdụ DFU, jide bọtịnụ anụ ahụ na ngwaọrụ ma jide ya maka sekọnd atọ. Mgbe ejidere bọtịnụ ike, jide bọtịnụ "Home" ma jide igodo abụọ maka 10 sekọnd. N'ikpeazụ, hapụ bọtịnụ ike ka ị na-anọgide na-ejide Ụlọ ruo mgbe iTunes kpebiri ngwaọrụ gị.
Ị banyela ngwaọrụ n'ime ọnọdụ mgbake, nke pụtara na ọ bụ naanị ọrụ a dị gị. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ. "Naghachi iPhone".
Mgbe ị malitere usoro mgbake ahụ, chere ruo mgbe njehie 2009 pụtara na ihuenyo. Mgbe nke ahụ gasịrị, mechie iTunes ma malite usoro ahụ ọzọ (ị gaghị egbupu ngwaọrụ Apple na kọmputa). Gbanwee usoro mweghachi ahụ ọzọ. Dị ka a na-achị, mgbe ịmechara omume ndị a, mgbake ngwaọrụ ga-agwụ n'enweghị njehie.
Usoro 5: Jikọọ ngwaọrụ Apple gị na kọmputa ọzọ
Ya mere, ọ bụrụ na emezighị njehie nke afọ 2009, ịkwesịrị ịmeghachite ngwaọrụ ahụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbalị ịnwụchaa ọrụ malitere na kọmputa ọzọ na iTunes.
Ọ bụrụ na ị nwere aro nke gị nke ga-ewepu njehie na koodu 2009, kọọrọ anyị banyere ha na ihe ndị ahụ.